Amanzi kunye neemephu. - Geofumadas
Matshi, 2012 ArcGIS-ESRI, Iiphotography, Geospatial - GIS
U-Esri waseSpeyin uqalise umkhankaso othakazelisayo woSuku lweManzi weSizwe, kunye nokunikezelwa kwewebhusayithi i-aguaymapas.com kwiphepha leendaba esichaza ngayo i-trastocamos kweli nqaku.
"Ngethuba leSuku lweManzi yamanzi kwi-Esri Spain sifuna ukubonisa indlela inkomiso yalezi zinyanga zokugqibela ichaphazela ngayo izibonelelo zethu zamanzi. Sikholelwa ukuba ukubonwa kwendalo kunye nokuziphendulela kwayo, kunye nokungabikho kwemithombo yolondolozo, kwimaphu, kunokunceda abemi ukuba baqonde imeko esiphila ngayo kwaye bathathe amanyathelo afanelekileyo ngokulawulwa kwesi sixhobo "
UGeorge Hidalgo, ojongene nokusingqongileyo kwe-Esri Spain.
Ukuchonga okuthakazelisayo kunye nesizathu esimele sikhathazeke sonke. Ngesiqubulo se-2012: Ihlabathi linxaniwe ngenxa yokuba silambile, Emva kobusika obudlulayo kwiminyaka yokugqibela ye-70, aguaymapas.com sinikela uluhlu lweemephu ezikhethekileyo ukubonisa imeko yangoku eSpeyin, ngenjongo yokusinceda siqaphele inyaniso kunye nesidingo sokuyilawula kakuhle.
Imithombo esetshenziselwa ukucwangciswa kwemephu yamanzi, aguaymapas.com, ivela kwingxelo yoluntu ye-Arhente kaRhulumente yeMeteorology, i-Hydrological Bulletin epapashwe nguNgqongqoshe wezeLimo, uLoqosho kunye neNgqungquthela.
Imephu inikeza imixholo eyahlukeneyo: IiMithombo zeManzi; Imvula yasebusika; Imvula yonke; Uhlalutyo lweAridity kwiminyaka yokugqibela ye-70;Ihlenga abantu baseSpeyin y Ukusetyenziswa kwamanzi
Kumephu sibona IiMithombo zeManzi, apho imeko yangoku yaseSpeyin ihlaziywa khona.
Imephu ibandakanya ukuhlelwa kweendawo zokuhlala ezixhomekeke kumthamo wamanzi abagcinayo ngoku, ukuthelekisa imeko ekhoyo ngokubhekiselele kwi-2011 kunye nomyinge onokufunyanwa kwiminyaka yamuva, kwakunye nolwazi malunga nokugcinwa kwemithombo yamanzi.
Phakathi kwedatha esinokuyifumana kwimephu, sinokubona ukuba kwiindawo ezinomdaka ezifana neGalicia, iMountain yaseCantabrian okanye i-Western Pyrenees, indawo yokugcina amanzi iphantsi kwamanqanaba aphantsi kakhulu. Ngethuba elisezintabeni zase-Extremadura okanye kwi-Guadalquivir Valley iindawo zokuhlala zihlala kwi-70% yazo amandla.
Idatha ikhishwe kwi-Hydrological Bulletin epapashwe nguNgqongqoshe wezeLimo, ukutya kunye neNdalo.
Ukuguquka kweNzantyambo Ukunyuka kwiminyaka elishumi elinambini yokugqibela
Imephu ibandakanya ukuguqulwa kwemvula eqokelelweyo phakathi neenyanga zikaFebruwari phakathi kweminyaka eyi-2000 kunye ne-2012 kunye nedatha evela kwi-Arhente yeMeteorological State.
Imephu sinokufumana le nkcukacha elandelayo: imvula ewayo ngexesha lwenyanga kaFebruwari ye-2012 ibe yinto ephantsi kakhulu kwiminyaka yokugqibela. Kwiindawo ezinomdaka ezifana neGalicia okanye kwiindawo eziphakamileyo zeentaba apho ukuqokelela kwekhephu (Pyrenees) kuqhelekile ngeli xesha, imvula sele ikhona engekhoyo.
Imephu ifaka umfanekiso we-raster obonisa imibala emfutshane ngokuhambisa imvula eSpain kunye nokuziphendukela kwemvelo kwexesha.
Ukuguqulwa kweeNkcazo zokuNyaka zonyaka ukusuka kwi-1921
Kumephu sinokukujonga ukuhlalutya kwemvula eqokelelweyo kunyaka wokuqala wonyaka weshumi kwi-1921, kunye nedatha efunyenwe kwi-Arhente yeMeteorological Agency.
Nangona kwiminyaka ehlalutyiweyo imvula ine-trendy cyclical tendency, ingabonwa njengasezantsi yesithathu ye-peninsula ukulandelana kweminyaka eyomileyo ngokuqhelekileyo.
Imephu ifaka umfanekiso we-raster ohlalutya ukusasazwa kwemvula kwi-geography yaseSpain ngemibala embalwa kunye nesatriki yokuvelisa evumela ukuchongwa kweempawu zezulu kwiimpawu ze-10 zexesha lexeshana ezihlalutyiweyo.
Uhlalutyo lwe-Adrid eSpeyin kwiminyaka yokugqibela ye-70
Ebalazweni singakujonga ukuhlaziywa kwemozulu yeSpeyin phakathi kwe-1931 ne-2011. Oku kuvumela ukufumana idatha kwinkqubo yokuchithwa kwamanzi emhlabathini kunye nomswakama emoyeni (ukusweleka komhlaba). Idatha ifumaneke kwi-Arhente yeMeteorological Agency.
Idatha efunyenweyo ibonisa ukuba ngaphandle kwe-Autonomous Community yaseGalicia, ixabiso lobuncwane landa kakhulu.
Kuyabonakala nje ukuba imimandla yeendawo ezinamanqanaba aphezulu ayancitshiswe kumashumi eminyaka edlulileyo, ebonisa indlela yokuphelelwa yintsholongwane ePeninsula.
Ukubala kuxhomekeke kubudlelwane phakathi kwamanzi kunye nobushushu. Indlela esetyenzisiweyo yokubala yikhowudi ye-Knoche (u-Ik): Ik = n * P / (100 * (T + 10)).
Ukufakela abantu eSpain
Le imephu ebonisa ulwazi ibonisa ezinye iidolophu zaseSpeyin ezicwiliswe ngamanzi ngenxa yokwakhiwa kwendawo yamanzi okanye umthombo. Idata ifumaneka kwi-Embalses.net.
Kule mephu, imbonakalo yenzelwe i-ArcGIS Explorer Online, isicelo esisebenzisana kakhulu esaphuhlisiwe Microsoft Silverlight.
Sicinga umzamo onomdla wokubonakala kokubini kwinto enokwenziwa ngeteknoloji ezithengisayo kunye nangokungeza kwiinkalo zomdla wehlabathi.
Post edlulileyo«Edlulileyo uluhlu Rhweba ngaphandle kwe Google Earth zilungelelanise eendawo kwi-Excel, Umfanekiso ne Rich Text
Post Next Ngasemva kwesandla sakhoOkulandelayo "